I-china Gelatin yefeshmallow ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
EMarshmallow, ukusimama kwegwebu nogwebu kusetshenziselwa i-gelatin, kulandelwe ukuqina ne-gelation. Ukukhetha imininingwane ehlukile ye-gelatin, noma ukuhlanganisa i-gelatin nesitashi esishintshiwe nezinye izinto zokusetshenziswa, singalungisa imikhiqizo ezinzile enobunzima obuhlukahlukene kanye nokwakheka.
70g ushukela omhlophe ogqamile, amanzi angama-70ml,
10 g we-gelatin powder, 70 ml amanzi abandayo,
Ummbila isitashi 30g, ushukela powder 10g
1. Kala izithako ezidingekayo kokubekwe eceleni.
2. I-10 g ye-gelatin powder ichithwa kuqala ngama-70 ml wamanzi abandayo abilisiwe kokubekwe eceleni.
3. Faka isitashi sommbila ebhodweni ugovuze gazinga emlilweni omncane imizuzu engu-3-5.
4. Govuza gazinga, kuphole bese uxuba noshukela oluyimpuphu, thatha uhhafu bese uhlunga esitsheni ukuvimbela ukunamathela.
5. Thela ushukela omhlophe oyi-70g embizeni, engeza amanzi angama-70ml.
6. Yehlisa ukushisa kuze kubilise amanzi kashukela namabhamuza. Uma kune-thermometer, yilinganise cishe ku-100 ℃. Vala ukushisa kuqala.
7. Thela kwisisombululo se-gelatin esincibilikiswe emanzini abandayo, ulethe ngamathumba futhi, bese ucisha umlilo.
8. Kupholile kuze kube sekushiseni okuncane (40-55 ℃).
9. Beka amaconsi ambalwa kalamula bese uwahambisa ngesivinini nge-beater kagesi aze aqine futhi abe usilika,
10. Thela ingxube esitsheni bese usebenzisa iscraper ukuyikhuhla ngokushesha. Uma igumbi lokushisa liphansi futhi isenzo sihamba kancane, i-marshmallow kulula ukuyiqinisa, engakulungele ukubunjwa.
11. Hlunga ungqimba lwesitashi noshukela oluyimpuphu ku-marshmallow bese uwafaka esiqandisini amahora angama-3-4. Sebenzisa ummese ukudweba umbuthano ngesizotha esitsheni, uphebeze inkinobho, ubambe ngobumnene ukudiliza, bese usika izingcezu ezincane.
Isimo sokuhlolwa: GB6783-2013 IMarshmallow
1. Amandla Jelly (6.67%) Ukuqhaqhaza okungu-220-260
Langaphambilini I-Gelatin Ye-Gummy Candy
Olandelayo: Inhlanzi iGelatin